Geomatics na sayensị ụwa na 2050 - Geofumadas
Julaị, 2020 ọtụtụ
Ọ dị mfe ịkọ ihe ga-eme n’otu izu; a na - ahazikarị atụmatụ ahụ, maka ọtụtụ ihe omume ga - akagbu, ihe ọzọ na - atụghị anya ya ga - ebilite. Ebu amụma ihe nwere ike ime na ọnwa na ọ bụrụ otu afọ ka a na-ejikọ ya na atụmatụ itinye ego na mmefu nkeji iri na anọ na-adịkarị obere, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ịhapụ ọkwa zuru ezu na ịkọwapụta.
Pkọ ihe nwere ike ime na afọ iri atọ agaghị abaghị uru ọ bụla, n'agbanyeghị na ọ ga-adọrọ mmasị na nchịkọta isiokwu niile dị na mbipụta a. Site n'akụkụ geomatic, anyị nwere ike ịkọwapụta akụkụ metụtara teknụzụ, usoro nchekwa ihe ọmụma ma ọ bụ onyinye agụmakwụkwọ; otu o sila dị, n’ọdị ogologo oge enwere ụdị mgbanwe dị iche iche anaghị agbanwe agbanwe dịka mgbanwe ọdịnala na mmetụta onye ọrụ na ahịa.
Ihe omume na-adọrọ mmasị bụ ileghachi anya n’otú ihe si dị ka afọ iri atọ gara aga, etu ha dị ugbu a na ebe ọnọdụ ụlọ ọrụ na-aga, ọrụ gọọmentị na agụmakwụkwọ; Inwe ihe omume nke geomatik na njikwa ihe omuma na oru nke oru ndi mmadu na mpaghara ndi mmadu, onodu aku na uba na gburugburu ebe obibi.
Roslaghachi azụ afọ iri atọ gara aga
30 afọ gara aga ọ bụ 1990. Mgbe ahụ, onye ọrụ na-atụ egwu na teknụzụ jiri 80286, jiri ihuenyo ojii na akwụkwọ ozi oroma n'azụ nzacha, Lotus 123, WordPerfect, Dbase, Bipụta Nna-ukwu na DOS dị ka sistemụ arụmọrụ. Site na oge ndị ọrụ nwere ohere ịnweta CAD / GIS imewe software chere dị ka ndị eze nke eluigwe na ala; ọ bụrụ na ha nwere otu Akwukwo n'ihi na PC nkịtị a na-ewelite ndidi na ịkwa emo nke ndị na-ese akwụkwọ.
Anyị na-ekwu maka ya Microstation 3.5 na Unix, Dọchị CADD, AutoSketch na AutoCAD ọ bụ ya bụ nke mbụ n'afọ ahụ ọ meriri Magazin Byte, mgbe bọtịnụ ndị gbanyere akara ngosi akara ngosi na ihe ọhụrụ paperspace na ọ dịghị onye ghọtara. Ọ bụrụ n ’ị tụrụ anya ịbanye na 3D dị mkpa ịkwụ ụgwọ ACIS.
Ọ ka ga-abụ otu afọ tupu mbụ kensinammuo interface nke ArcView 1.0, yabụ na 1990 onye maara maka GIS jiri ya mee ya ARC / INFO n'usoro iwu
Maka ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ, ọ ga-ewe afọ 2 ka ọ pụta NKWA 4.1, agbanyeghị na teknụzụ ndị a niile tozuru oke nke njem kemgbe 1982.
Banyere nkwukọrịta zuru ụwa ọnụ, na 1990 ọ ga-apụ n'anya ARPANET ya na kọmputa 100.000 ejikọtara; ruo 1991 okwu ahụ ga-apụta World Wide Web. Ihe kacha dị na agụmakwụkwọ bụ ọmụmụ akwụkwọ ozi n'ihi Moodle O nyere ya izipu mbu ya rue rue 1999 ma n’azo uzo iji zuta ihe bu igha ahia ma obu n’ekwentị nye nọmba kaadi edere.
Ihe ngosi ugbua nke Geomatics na Sciences Earth.
N’ịhụ otu ihe dị afọ iri atọ gara aga, anyị maara na anyị na-ebi n’oge dị ebube. Ma obughi nani maka ngwanrọ na ikike nke anyi ji, kama maka ulo oru dum. Nhazi na njikọta abụrụla ihe dị mkpa nke na onye ọrụ na-agagharị na ekwentị mkpanaaka, rịọ maka ọrụ ụlọ, debe ọnụ ụlọ na kọntinent ọzọ na-enweghị ịghọta etu ọrụ UTM si arụ ọrụ.
Akụkụ na-adọrọ mmasị bụ njikọta nke gburugburu Geo-engineering zuru oke. A manyere ịdọ aka ná ntị maka ijikwa data nke tolitere na ụzọ dị iche iche ịgbakọta na njikwa ọrụ ahụ, na-eme ka ọ dị mfe ma na-ala azụ ịnabata ụkpụrụ.
Ntughari a nke usoro ihe omumu banyere oru a choro ka ndi okachamara ba uba nke ihe omuma ha dabere na ulo oru nke choro iru oru. The geographer, geologist, Surveyor, engineer, architect, onye na-ewu ụlọ na onye ọrụ ọrụ kwesịrị ị modelomi ihe ọmụma ha ọkachamara na otu dijitalụ gburugburu ebe obibi, nke na-eme ma ala mmiri na ihu ala, nhazi nke ọnụọgụ ọnụọgụ na nkọwa nke ihe ndị dị mkpa. , koodu dị n’azụ ETL dị ka interface dị ọcha maka onye ọrụ njikwa. N'ihi ya, ụlọ akwụkwọ mmuta na-agabiga na ọkwa dị oke egwu iji kwado onyinye na-egbo mkpa nke ọrụ ọhụụ na mgbanwe ahịa.
Enwere mgbawa mgbawa na ihe ọhụrụ. Ugbu a, anyị na-achọ ịhụ otu mmalite.
Afọ 30 n’ọdịnihu ga-ele anya.
N'ime afọ 30, ebube anyị kacha mma nwere ike ịdị n'oge ochie. Ọbụna ịgụ isiokwu a ga - eme ka mmetụta nke ngwakọ dị n'etiti ihe omume nke Jetsons na ihe nkiri Agụụ. Ọ bụ ezie na anyị maara na ọnọdụ ndị dịka njikọta 5G na mgbanwe ụlọ ọrụ nke anọ dị nso na akụkụ, ọ naghị adị mfe iji chọpụta mgbanwe nke ọdịbendị ga-enweta na onye nkuzi-ụmụ akwụkwọ, ụmụ amaala-gọọmentị, ndị ọrụ-ụlọ ọrụ, mmekọrịta ndị ahịa. onye na-emeputa ihe.
Ọ bụrụ na anyị na-atụgharị aka na ọnọdụ nke ugbu a ụlọ ọrụ na-anya ụgbọ ala, gọọmentị na agụmakwụkwọ, ndị a bụ ụzọ m si ele anya.
Idochi ụkpụrụ ga-abụ usoro dịịrị ọrụ. Ọ bụghị naanị maka ebumnuche teknụzụ ma ọ bụ usoro ozi, mana gbasara ọrụ nke ahịa. Ọ ga-adị nnọọ mma ịhazi oge nnabata maka ịnye ọrụ, nkwa gburugburu ebe obibi, nkwa ụlọ. Industrylọ ọrụ geomatics kwesịrị ịgụnye ọtụtụ ihe mmadụ, n'ihi na ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa na ijikọ ụwa n'ezie na ejima dijitalụ, karịa nnọchite anya, nkwekọrịta maka mmekọrịta nke ndị mmadụ, ụlọ ọrụ na gọọmentị.
Ka ọ na-erule 2050 blockchain ga-abụrịrị usoro nghazi nke HTML, ọ bụghị dịka edozi kama ọ bụ dịka njikere maka nsogbu buru ibu, ebe nhazi kwesịrị ịbụ ụkpụrụ dịịrị.
Ikpeazu ahia ga-ekpebi ike iji ya. Onye ọrụ nke teknụzụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ga-enwe ọrụ ọ bụghị naanị maka ndụmọdụ kamakwa mkpebi; nke ndi ozo dika ime obodo na nhazi gburugburu ebe obibi gha abu ohere maka ozuzu banyere ala. Nke a ga-egosi na ị na-eji ihe ọmụma pụrụ iche arụ ọrụ site na ịdọ aka ná ntị dịka ọdịdị ala, geology, topography ma ọ bụ injinia na azịza ebe onye ọrụ ikpeazụ na-eme mkpebi. Ọrụ ahụ ga-agbanye ihe ọmụma ya na ngwaọrụ, nke mere na nwa amaala nwere ike ikpebi ebe ọ chọrọ ụlọ ya, họrọ ụkpụrụ ụlọ, gbanwee ụkpụrụ maka mmasị ya wee nata atụmatụ, ikikere, onyinye na nkwa ozugbo. Site na mkpebi, ụdị ihe ngwọta a ga-arụ ọrụ ma n'ọtụtụ akụ, dị ka netwọkụ nke ihe eji arụ ọrụ, mpaghara ma ọ bụ mba; Site na ihe ndi nwere ike ichota, ihe omuma mgbakọ na mwepu.
Njikọ na imekorita ya na oge ga-adịrị. N'ime afọ 30, ozi gbasara ala dịka onyonyo, ụdị dijitalụ, mgbanwe gburugburu ebe obibi na ụdị
Amụma s ga-abụ nnọọ ihe ziri ezi na inweta. Site na nke a, ihe mmetụta maka ịnata ozi site na satịlaịtị na ngwaọrụ ndị dị ala karịa ga-aga n'ihu na-eji ihe kwa ụbọchị eme ihe mgbe ha meriri nsogbu nke nzuzo na nchebe.
Mmụta niile ga-abụ ihe mepere emepe ma a ga-eleba ebe ahụ anya. Ọtụtụ akụkụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-abụ nke mebere, nke a na-apụghị izere ezere agụmakwụkwọ. Nke a ga - eduga na ịme ka nghọta dị mfe nke na - adịghị mkpa maka ndụ bara uru yana ịhazi ụkpụrụ nke taa bụ ihe mgbochi dịka oke, oke, asụsụ, anya, nnweta. Ọ bụ ezie na ókèala ga-anọgide na-adị oke mkpa, na gburugburu ebe obibi na-ewu ewu, ha ga-anwụ n'ihi ahịa na ọdịda nke ofufe nke nzuzu. Geomatics enweghị ike ịnwụ, mana ọ ga - agbanwe site na ịdọ aka ná ntị ọkachamara ọkachamara ka ịmara ihe ịma aka ọhụrụ nke ụmụ mmadụ.
Ruo ugbu a, iji nwee afọ ojuju ịbụ akụkụ nke "afọ 30 tupu", gbara akaebe ugbu a na ọ theụ nke ịbanye usoro ọhụụ ebe naanị echiche ndị na-eme ka ime mkpebi na iwepụta ahụmịhe njirimara kachasị mma ga-adịgide. .
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ihe na-ewu ewu gbasara oge dijitalụ a, pịa ebe a
Previous Post«Previous Geofumadas - na ọnọdụ nke oge dijitalụ a
Next Post Obodo nke narị afọ nke 101st: ihe owuwu ihe owuwu XNUMXNext »